पर्यटन सेवा संघ पर्यटन व्यवसायीको पाठशाला हो
बल बहादुर सामरी, महासचिव, पर्यटन सेवा संघ
विसं। २०३८ सालमा धादिङ जिल्लाको मैदी गाविसमा जन्मिनुभएका बलबहादुर सामरी पर्यटन सेवा संघको महासचिव हुनुहुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको संस्था पर्यटन सेवा संघको केही महिनाअघि सम्पन्न साधारणसभाबाट उहाँ महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । संस्थाको अलावा व्यक्तिगत रुपमासमेत उहाँले पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि पहलकदमी अगाडि बढाइरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ सामरीसँग आधारित रहेर तयार पारिएको एक सामग्रीः
मध्यमबर्गीय परिवारमा बुबा इन्द्रबहादुर सामरी र आमा सूर्यकुमारी सामरीको कोखबाट सातौँ सन्तानको रुपमा जन्मिनु भएका बलबहादुर सामरीको बाल्यकाल मैदीमा नै वित्यो । स्थानीय श्री संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा आठसम्मको अध्ययन सकेर उहाँ स्वामी भञ्ज्याङ उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभयो । एसएलसी उत्तिर्ण गरेलगत्तै सामरीले ग्रामिण विपी स्मृति प्राथमिक विद्यालयमा झण्डै दुई वर्ष स्यमंशेवकको रुपमा शिक्षण गर्नुभयो ।
वि।सं। २०५७ सालमा विद्यालयीय तहको अध्ययन पूरा गरेपश्चात २०६० सालमा उहाँ राजधानी छिर्नुभयो अवसरको खोजीमा । काठमाडौँ आएलगत्तै उहाँ अध्ययनको शिलशिलामा रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना हुनुभयो, त्यहाँबाट सामरीले प्लस टुसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रमा उहाँले पाँच वर्ष पथप्रदर्शक रहेर काम गर्नुभयो । यसक्रममा उहाँ नेपालकमा झण्डै सबैजसो पर्यटकीय पदमार्गहरु चहाने मौका पाउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा लागेको केही समयपछि भने उहाँ आफैँले एक टेकिङ कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनु भयो माई ट्रिप एडभेन्चर को स्थापना गरेर ।
एउटा अवसरको खोजीमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका सामरीले आफैँले कम्पनी सञ्चालन गर्दाचाहि निकै उल्झनहरु झेल्नुपयो । आफ्नो नातेदार आर्मीमा भएको नाताले कक्षा नौ मै पढदा ताका आर्मीमा भर्ना हुुनका लागि प्रयास गर्नुभएर असफल भएपछि भिजीट नेपाल १९९८मा पथप्रदर्शक काम थलन गर्नुभयो । हारु ट्रेक्सका सञ्चालक केशव अधिकारी, आशाही ट्रेक्सका सञ्चालक अञ्जन कुमार थापाको प्ररणा र अर्का व्यवसायी अनुज थापाको सहयोगले उहाँ पर्यटन व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
यसपश्चात उहाँ पुनः अध्ययनमै लाग्नुभएको थियो । एसएलसी दिएर केही समय शिक्षण पेसालाई अंगाल्नु भएको थियो । यसपश्चात सन् २००५मा पुनः पर्यटन क्षेत्रमा पथप्रदर्शक बन्नुभयो । सामरी पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध हुँदा चाँही नितान्त फरक महसुस गर्नुभयो ।
नेपालमा अथाह पर्यटकीय संभावना भए पनि चुनौती पनि कम नरहेको महसुस उहाँलाई भयो । सुरुको समयमा निकै अप्ठ्याराहरुको सामना गर्नु परेको उहाँको अनुभव छ । उहाँको अनुभव छ –जागिर खानु र आफैँ कुनै नयाँ व्यवसाय संचालन गर्नु फरक कुुरा रहेछ । सन् २०११ देखि तीन वर्षसम्म राम्रैसँग चलेको थियो व्यापार । सन् २०१३ देखि पुनः दुई वर्ष सन्तोषजनक देखिएको उहाँको व्यापार भूकम्पपछि सुस्ताएको छ, समग्र पर्यटन क्षेत्रकै नियती उहाँले पनि खेप्नु परेको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध रहँदा र पर्यटन सेवा संघमा आवद्ध रहँदाको अवधिमा उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई अझ नजिकबाट चियाउने मौका पाउनु भएको छ । नेपाल एक पर्यटकीय मुलुक भए पनि यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु अझै विद्यमान रहेको उहाँको ठहर छ । सरकारको नीति निर्माणको तहमा घरेलु पर्यटनलाईमात्र समेटेको तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यथेष्ट ध्यान दिन नसकेको सामरी ठान्नुहुन्छ । ‘मुलुकको पर्यटन जे जति विकास भएको छ, त्यो व्यवसायीहरुको व्यक्तिगत सम्बन्ध र लिङ्कका आधारमा मात्र भएको छ, सरकारले प्रयाप्त ध्यान दिन सकेको छैन्’ सामरी भन्नुहुन्छ, ‘पर्यटन विकासका लागि सरकारले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको शूल्क घटाउनु पर्ने, बजारीकरणलाई बृहत बनाउनु पर्ने र नीति निर्माणमा थप स्पस्टता तथा कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।’
साना पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समय एक प्रकारले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको उहाँको बुझाई छ । ‘पर्यटन क्षेत्रमा माफियातन्त्र र राजनीति हावी देखिन्छ’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘सिप, क्षमता र अनुभवलाई भन्दा पनि लगानी र राजनीति आवद्धता प्रधान हुनु चिन्ताको विषय हो ।’
राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहनुभएका पर्यटन सेवा संघका महासचिव सामरी अन्य दजर्नौं सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध भएर आफ्नो जन्मभुमको लागि विभिन्न किसमका सामाजिक कार्यहरु गरिरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ उनै सामरीसँग पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको संवादः
पर्यटक सेवा संघ के गर्दै छ ?
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पर्यटन क्षेत्र र यसमा आबद्ध व्यवसायीहरुको हितका लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने मामिलामा पर्यटनसम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गरेर पर्यटन पुनरुत्थानको लागि अघि बढिरहेको छ, संस्था । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले के र कस्ता काम गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले छलफल बहस गरेर कार्ययोजना बनाउँदैछौँ ।
पर्यटन पुनरुत्थानको लागि अहिलेसम्मको अवस्थामा के कति काम भएको पाउनुभएको छ ?
भूकम्पपछिको अवस्थामा पर्यटन पुनरुत्थानका लागि हामी व्यवसायीहरु व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा कामहरु गरिरहेका छौँ । संकटले निम्त्याएका मानवीय संकटमोचनका लागि व्यवसायीहरु जुटेर व्यवसायको पुनस्र्थापनाका लागि जुटिरहेका छन् ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुध्रिने छाँट कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालको पर्यटन अहिले तत्कालै चाँहि बौरिईहाल्ने स्थिति छैन । तर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एकअर्काको भूमिका सकारेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा सन् २०१६ को अक्टोबरमा हामी पहिलेकै विन्दुमा पुग्न सक्छौँँ भन्ने लाग्छ । केही समय त लागिहाल्छ सरकारले उपत्याकाका तीन जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । यो फिर्ता लिनुप¥यो सँगसँगै पुनर्निर्माणका कामहरुलाई तिव्रता प्रदान गर्नुपर्छ । त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई विनाशूल्क प्रवेश दिनुपर्छ ।
अहिले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुले यहाँ आउनका लागि के–कस्ता समस्याहरु खेप्नुपरिरहेको छ ?
भूकम्पको विषयमा जे–जस्ता अफवाहहरु फैलाईयो त्यसको परिणामस्वरुप पर्यटकहरुबाट सुरक्षाकै विषय प्रधान रुपमा उठेको पाइएको छ । यसमा सरकारले विश्वस्त पार्नुपर्छ ।
पर्यटक सेवा संघ जेठो संस्था हो, तपाईहरुभन्दा निकैपछि स्थापित संस्थाहरु अगाडि देखिन्छन्, संघ त धेरै पछाडि परेको देखिन्छ नि ?
कुनै पनि सामाजिक उद्देश्य बोकेको संस्था कहिल्यै पनि पछि पर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । पछिल्लो समय विभिन्न संस्था खोल्ने सदस्य बनाउने, शूल्क उठाउने, राजनीतिक पहुँच कायम गरेर, अन्य संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडी गएको देखिएको हो । तर, पर्यटन सेवा संघ ओझेलमा परेको छैन । हामी विशुद्ध सामाजिक सेवामा निरन्तर क्रियाशिल छौँ, यहाँ राजनीतिक विभाजन छैन । यस्तो अवस्थामा हामी पछाडी परेका छौँ भन्ने लाग्दैन ।
व्यवसायीहरुसँग राम्रो सहकार्य गर्न नसकेको कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ ?
पर्यटन सेवा संघ स्थापना हुँदाको बखत अहिलेका कुनै पनि पर्यटकीय संस्थाहरु स्थापना भएका थिएनन् । सो अवधिमा जति पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका काम भएका थिए, संघले नै गरेको थियो । पर्यटन सेवा संघकै स्कुलबाट आएका व्यवसायीहरु अहिले सफल छन् । तसर्थ, पर्यटन सेवा संघ पर्यटन व्यवसायीहरुको पाठशाला हो । संघबाटै उहाँहरुले करिअर निर्माण गर्नुभयो र पछि संस्थाको आवश्यकता छैन भन्नेतिर लाग्नुभो त्यसैकारण संस्था पछि परेको देखिएको हो । हामीले मिडियाबाजी गर्न सकेनौ वा चाहेनौँ ।
पर्यटन सेवा संघले कसरी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ?
हामीले पर्यटकहरुलाई प्रदान गर्ने सहयोग भनेको पर्यटकहरुलाई स्वयंशेवा प्रदान गर्नका लागि स्वयंशेवकहरु खटाएका छौँ । नियमित रुपमा उनिहरुले पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने गर्छन ।
त्यस्तै भाषिक कठिनाइहरुलाई समाधानार्थ हामीले सेवा प्रदान गर्ने, नक्सा वितरण गर्ने जस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्छौँ । यसपछि हामी हाम्रो भूमिका विस्तार गर्ने हिसावले विभिन्न कार्यक्रमहरुको योजना पनि बनाएका छौँ ।